Madda Walaabuu Press: Godina Arsii magaalaa Dheeraatti namoonni sadii ajjeefaman.
Godina Arsii magaalaa Dheeraatti namoonni sadii ajjeefaman.
Posted by MADDA WALAABUU PRESS on 10/07/2015
Onkoloolessa 07, 2015 | Oromia Media Network (OMN)
Godina Arsii aanaa Doddotaa magaalaa Dheeratti, ijaarsa seeraan alaa manneenii jechuun, wayta bulchitoonni aanichaa manneen jiraattotaa diigaa turanitti, jiraattotaa fi poolisoota jiddutti walitti bu’iinsa uumameen namoonni sadii lubbuun darbuu himame.
Godina Arsii aanaa Doddotaa magaalaa Dheeratti, guyyoota afur irraa jalqabee bulchitoonni aanichaa, manneen seeran ala ijaartan jechuun, wayta manneen diigaa turanitti, mormii jiraattonni dhageesisaniin namoonni sadii lubbuun darbuu himame.
Jiraataan magaalaa Dheeraa tokko OMN f akka himanitti, manneen jiraattota wayta diiggamaa turanitti, namoonni lama summii dhuguun kan ufi ajjeesan yoo ta’u, namni tokko ammoo manni kiyya diiggamuu hin qabu jechuun, osoo falmatuu poolisiidhaan wal ajjeesan.
Magaalaan Dheeraa wayta ammaa poolisoota federaalatiin guutaamtee jirti kan jedhan namni kun, haalli ammaan kana muldhatu hedduu kan nama yaddessuudha.
Namoonni manneen keenya diiggamuu hin qabu jechuun mormii nagayaa dhageesisaa osoo jiran lubbuun darban kun, kanaan dura lafa qabiyyee isaanii irratti mana ijaaratanii seeraan keessa jiraataa kan turan ta’uu namni kun nutti himan.
Namni kun akka jedhanitti, namoota manneen isaanii jalaa diiggame kanaan, yeroo dheeraaf qaamaan kan wal beekan ta’uu nutti himuun, hedduun isaanii namoota harka qalleeyyii akka ta’anis dubbatan.
Guyyoota afur keessatti manneen jiraattotaa 36 kan diiggaman yoo ta’u, manneen 24 ammoo diggamuudhaaf qalamaan dibamanii jiru kan jedhan namni kun, sababa kanaaf jiraattonni hedduun mormii qaban dhageesisaa jiru.
Usmaan Ukkumeetiin qophaaye.